Toddobaadka Hidda-ha iyo Dhaqanka oo Muqdisho lagu qabtay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Toddobaadka Hidda-ha iyo Dhaqanka oo Muqdisho lagu qabtay
Waxaa toddobaadkaan lagu qabtay magaalada Muqdisho barnaamij bandhig-dhaqameed ah oo lagu soo bandhigayay dhaqanka iyo Hiddaha. Bandhig-dhaqameedka oo lagu qabtay xarunta aqalka Dowladda Hoose ee Muqdisho ayaa waxaa ka soo qeybgalay madaxda maaamul-ka gobolka Banaadir, wasiirro, xildhibaanno iyo qeybaha bulshada ee ku nool gobolka Banaadir.
Bandhigga oo soc-day labo maalin ayaa waxaa lagu soo band-higay waxyaabaha ay Soomaalidu asal ahaan u leedahay ama ay caan ku tahay.Barnaamijkaan waxaa ka qeybgalay 17-ka degmo ee gobolka Ba-naadir, iyadoo ay degmo walba si gaar ah u soo bandhigtay waxyabaha ay dhaqan ahaan caanka ku tahay.
Guddoomiyaha ururka Haweenka Gobolka Ba-naadir, Marwo Jawaahir Baarqab oo hormuud ka ahayd qaban qaabada bandhig-dhaqameedkaan ayaa u sheegtay Xaqiiqa Times in bandhiggaan uu ku saabsaanaa isdhex-galka bulshada gobolka Banaadir iyo in loo soo bandhigo dhaqankooda suuban.
Jawaahir waxa ay shee-gtay inay muhiim tahay in shacabka, gaar ahaan dhallinyarada da’da yar loo soo bandhigo, lana dareensiiyo dhaqankoo-da soo jireenka ah ee suubban, si ay wax uga bartaan. “Waxaad og-tahay dalkeena 25 sano ayuu burbursanaa, sidaas darteed ka haween ahaan waxaan go’aansannay inaan muujinno in wali uu nool yahay dhaqan-keenna iyo hiddaheena,” ayay tiri. Waxay intaa ku dartay “ujeedka ugu weyna bandhiggaan waxa uu ahaa soo noolaynta dhaqanka iyo hiddaha iyo in lagu horumariyo isdhexgalka bulshada ku dhaqaan iyo nabadda.”Waxa ay tilmaantay in bandhiggaan ay soo agaasimeen ururka Haweenka Gobolka Banaadir, ahmiyadda ugu weyn ee loo qabtay ay ahayd in caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ay tusaan in hiddii iyo dhaqankii Soomaaliy-eed uu wali nool yahay, ayna muhiim tahay in la horumariyo si uu uga qeyb qaato isdhexgalka bulshada iyo nabadda. Sidoo kale Marwo Jawaahir waxa ay xustay in ay rajaynayaan in bandhig-dhaqameed kan oo kale ah ay ku qaban doonaan gobollada dal-ka, si kor loogu qaado hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, loona horumariyo isdhexgalka bulshada.
Guddoomiye Jawaa-hir waxa ay sidoo kale sheegtay in xaruntii dhaqanka iyo farshaxan ee Dowladda Hoose ee Muqdisho dib loo soo noolayn doono si loo horumariyo hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Bandhigga ayaa waxaa lagu soo bandhigay labadii maalmood ee uu socday waxyaabaha ay Soomaalida dhaqan ahaan asalka u leedahay sida cunto Soomaaliga, malaayga, aqal Soomaa-li laga dhisay goobta, karinta cuntooyinka iyo lacagta Shilling Soomaa-liga.
W/Q Aadan Suxeyfa
Previous articleDhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe